Xaawa si ay u Daahfuraan Bixiye Kordhinta Qalabka Guriga ee HomeKit bisha Sebtember | Wararka IPhone
Eve si ay u bilawdo fidiyaha Bluetooth-ku-habboon ee HomeKit-ka ah bisha Sebtember
Kariim Hmeidan | | Qalabka IPhone
Warku hadda na soo gaadhay oo wiilashu ka Eve (Elgato hore) waxay qorsheyneysaa inay soo bandhigto fidiyaha cusub ee Bluetooth diyaar u ah inaad siiso howlo badan aaladahaaga. Way ugu yeereen Eve Extend waxaana loogu talagalay inuu noqdo wehelka ugu fiican Eve Aqua, Xaawa kumbuyuutarka cusub ee xakamaynta waraabka. Boodka ka dib waxaan ku siineynaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qalabkan cusub ee ka yimid Eve, sumadda caanka ah ee aaladaha guryaha casriga ah.
Waa sidaas waxa ugu weyn ee ku saabsan aaladaha casriga ah ee Bluetooth waa inaysan u baahnayn xarunHaa, qiyaasta waxqabadka waxay ku egtahay masaafada calaamadda Bluetooth lafteeda. Taasi waa sababta ragga ka soo jeeda Xaawa ay u bilaabeen Eve Extend-kan si ay u keenaan calaamadda Bluetooth dhammaan qaybaha gurigeenna. Sida iska cad Tani waxay leedahay khiyaano tan iyo dhamaadka Eve Extend-ka ma joojinayo inuu noqdo xarun cusub, aalad cusub oo noo ogolaaneysa inaan helno daboolida Bluetooth laakin taasi aakhirkeedu waa intaas, hal qalab oo dheeri ah oo gurigeenna ah.
Iyada oo ay la socoto Eve Aqua, Eve Systems waxay soo bandhigeysay aaladda xakamaynta ee HomeKit ilaa xagaagii la soo dhaafay […] Eve Aqua waxay ku xiriirtaa Bluetooth. Hadda, iyadoo kuxiran cabirka beerta, Eve Aqua waa la hagaajin karaa si aysan ugu baahnayn inay ku xirmaan iPhone ama HomeKit Hub (HomePod, iPad ama AppleTV) markii loo baahdo. Ha welwelin, waraabintu waxay u shaqeysaa iyada oo aan lahayn xiriir firfircoon oo iPhone ah, maadaama waqtiyada waraabinta si toos ah loogu qoro Eve Aqua. Marka qalabku wuxuu ku shaqeeyaa isku filnaansho.
Eve Extend, fidiyaha Bluetooth, waxaa loo qaabeyn karaa qaab caadi ah iyada oo loo marayo barnaamijka Eve. Qalabka waxaa loo qoondeeyay qol. Eve Extend waxay kuwada xiriirtaa WiFi-ga kumbuyuutarkaaga iyo Bluetooth aaladda Eve. Guud ahaan, waad isku xiri kartaa Eve Extend [ilaa siddeed qalab]. Dabcan, waad isku xiri kartaa oo keliya Eve Aqua iyo Eve Extend, laakiin aasaas ahaan dhammaan aaladaha Bluetooth ee ku xiran Xaawa.
Waxa aan kuu sheegeyno, Eve Extend-kan cusub waa aalad aad u xiiso badan oo asal ahaan u noqon doonta buundo dhammaan qalabka Eve ee leh Bluetooth, aakhirka wax waxay xallin doontaa nolosheena si looga fogaado haysashada aalado biriij badan waxayna sidoo kale naga fogaan doontaa inaan u adeegsanno inaan haysano iPad ama Apple TV oo sidoo kale qabta shaqadan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Eve si ay u bilawdo fidiyaha Bluetooth-ku-habboon ee HomeKit-ka ah bisha Sebtember
Waxay ka dacweeyaan Samsung inay ku dhawaaqday iska caabin biyo ah oo la sheegay inay ka jirto boosteejooyinkeeda oo aan jirin
Kuwani waa sheeko-xariifyada ugu waaweyn ee barnaamijka xusuus-qorrada ee iPadOS